Nokho, isaladi ngesiGreki kwesiko, njengoba cuisine YesiGreki jikelele, libhekene lula kakhulu zokupheka, kodwa izitsha eziningi kazwelonke bayaziwa kuwo wonke umhlaba njengoba elimnandi, enempilo futhi ezihlwabusayo kakhulu.
Imifino, inyama ebomvu kwasolwandle, iwayini zendawo, imbuzi ushizi kanye, yebo, amafutha omnqumo - konke lokhu kuyizinto izithako main cuisine ngesiGreki. Nokho, amaGreki uhlakaniphile bakwazi ukuzuza ngalobu isethi ubuncane imikhiqizo uthole imiphumela emihle kakhulu, okokuqala kunakho konke, nge ngendlela efanele izinongo ezahlukene salads ukunakekela okukhethekile izinga kanye freshness imikhiqizo. Kubonakala kulula nje ukwenza isaladi ngesiGreki, wena nje ukuthenga izithako ezidingekayo kanye nquma bese gcwalisa it. Yingaleso sikhathi-ke, ngokuvamile phambi kowesifazane ababemvakashele, futhi kuphakama umbuzo ngokuqondene nokuthi imiphi sauce isaladi ngesiGreki kungaba elilungile kakhulu.
Kufanele uthe zokupheka zakudala cuisine ngesiGreki njengoba umqondo ezinjalo "sauce" alikho nhlobo, kukhona nomqondo ukugcwalisa noma refilling. Njengomthetho, yokugcwalisa bahlanganisa ikakhulu amafutha, lapho amaGreki engeza ezihlukahlukene seasonings, pepper ikakhulukazi abamnyama, Thyme, oregano, dill omisiwe. Inani elikhulu izinongo musa amaGreki akuvamile ukuyisebenzisa, lapho sauce sikulungele isaladi isiGreki, njengamaJuda inhloso ukugqamisa, yahamba ukunambitheka esemqoka yalolu (noma iyiphi enye) izitsha, hhayi ukuyishintsha ngokuphelele. Ngaphezu kwalezi seasonings, kusaladi abalandeli ngezinye izikhathi amafutha omnqumo wathela amanzi kalamula noma iwayini uviniga lemali enkulu, isib, hhayi elilodwa ezintathu wezipuni.
Eminyakeni yamuva, labapheki abaningi ukutolika abanothando on isihloko ongakhetha isaladi ngesiGreki, kwengezwa isitshalo seqanda, amazambane, tincetu inhlanzi enosawoti, inkukhu, izimfanzi. Abantu abaningi afana nayo, kodwa abantu okuqinile futhi uyisidala yaseGrisi cha perceive lezi okujabulisa. Ezindaweni zokudla, konke ungathola, kodwa amatafula amaGreki - neze.
Nokho, uma ufuna izame - sicela. Uma ufuna ukungeza nezimfanzi isaladi, sikucebisa ukwenza usoso for isaladi nge imfanzi, okuyiwona uzodinga: 6 wezipuni imayonnaise, 4 wezipuni amafutha omnqumo, umpe lukalamula, 2 Amazinyo garlic.
Ukuze isaladi esetshenziswa njengoba garlic fresh, futhi Baked. Kulokhu, u-garlic fresh ukunikeza sauce flavour evelele futhi ukunambitheka. Uma lokhu ngendlela esilindele yakho, kufanele athathe ikhanda garlic, ukuxubha ke ngamafutha omnqumo, bopha in ucwecwe ubhake kuze ithenda at 180 ° C (cishe ihora). Baked garlic kumele selehlile.
Okulandelayo, uzodinga 1 isipuni sauce Worcester, isigamu isipuni izinhlanzi sauce. Lokhu sauce zingatholakala ezitolo ezithengisa imikhiqizo ukudla Asian. Esikhundleni ke ungakwazi ukuthatha nokunamathisela anchovy noma nezibopho anchovy, okumele ugaye kuze unama.
Namanje thatha 1 isipuni isinongo ngesisekelo red pepper ashisayo. Uma ungathandi khona, ungakwazi ukusebenzisa leli isinongo. Ngaphezu kwalokho, uzodinga mayelana ezimbili wezipuni weparmesan ushizi kanye ingcosana emnyama.
Yiqiniso, akukhona sauce for isaladi ngesiGreki, kodwa uma wengeza ku isaladi nezimfanzi, ibhandishi kuyoba usizo kakhulu.
Uma une blender, it kuzokuvumela ukupheka usoso ngokushesha okukhulu, umane futhi ngaphandle komzamo omkhulu. Beka endishini zonke izithako lelungiselelwe (ngaphandle weparmesan yashizi) bese Sula into eyohlobo, okuyinto lizofana e imayonnaise ukungaguquguquki. Ekupheleni ukubeka weparmesan yashizi.
Beka sauce esiqandisini kuze kufika isikhathi sokuba salads.
Namuhla kuthandwa imbiza i-arugula. Yiqiniso, ungasebenzisa i sauce isaladi abavamile ngesiGreki, kodwa thina elikweluleka ukwenza usoso esikhethekile isaladi nge i-arugula. Kuyadingeka ukuba uhlanganise endishini encane lisikiwe (noma ingcindezi) garlic, ezinye usawoti, emnyama, oregano, omisiwe omnqumo amakhambi, bese uthele ingxube nomphumela kufanele kube amafutha omnqumo ake ume imizuzu okungenani engu-15. Khona-ke uthele le isaladi sauce.
Dinner imenyu: ukulungiswa nengulube inyama patties
Bagels iresiphi kanye inyama nengulube kuhhavini: ukupheka isidlo esishisayo